शाकाहारी भोजन खानुका फार्इदाहरु
काठमाडौं - यस विषयमा धार्मिक दृष्टिले बहस हुन सक्छ । तर, स्वास्थ्य र वैज्ञानिक दृष्टिले भने त्यति ठूलो बहस छैन । विभिन्न अनुसन्धानले पत्ता लगाइसकेको कुरा के हो भने मांसाहारीभन्दा कैयौँ गुणा बढी शाकाहारी भोजन फाइदाजनक हुन्छ र शाकाहारीको आयु पनि लामो ह ...
मानिसलाई कति निद्रा आवश्यक ? कम निद्राले लाग्न सक्छ हृदयघातको समस्या
काठमाडौं - निद्रा हाम्रो मुटुको स्वास्थ्यको लागि धेरै फाइदाकारी छ । अचेल पर्याप्त मात्रामा निदाउनु अपवाद नै बनिसकेको छ । हरेक व्यक्ति दिनभर त व्यस्त हुन्छ नै, राति पनि टिभी, कम्प्युटर र मोबाइलमा झुम्मिरहनाले मानिसहरू पर्याप्त मात्रामा निदाउँदैनन् ।एक ...
गाजरका यस्ता ६ फाइदा
गाजर स्वास्थ्यका लागि अत्यन्तै फाइदाजनक छ । गर्मीमा सलादको रुपमा गाजरको प्रयोग गर्नु फाइदाजनक हुन्छ । सय ग्राम गाजरमा ८० ग्राम पानी, ४.७ ग्राम ग्लुकोज, २.८ ग्राम रेसा, ०.९ ग्राम प्रोटीन, ०.३ बोसो त्यस्तै भिटामिन के पनि पाइन्छ । गाजरको सेवनले हा ...
अनारका यी फाइदा बारे जानकारी लिनुहोस्
काठमाडौं— अनारलाई सबभन्दा स्वास्थ्यवर्द्धक र पोषक तत्त्वले भरपूर फल मानिन्छ । स्वाद पनि यसको गजबको हुन्छ । टन्नै फाइबर, भिटामिन सी लगायतका तत्त्व हुनाले अनार दिनदिनै खानु राम्रो हुन्छ । यसले भुँडी लाग्न दिँदैन ।अनारको जुस पिउनु अत्यन्त लाभदायक ह ...
कुन फलले के फाइदा गर्छ ? एकपटक अवश्य जान्नुहोुस्
काठमाडौं - फलफूल स्वास्थ्यका लागि निकै उपयोगी मानिन्छ । फलफूलले मानिसलाई पर्याप्त मात्रामा पोषण प्रदान गर्नुका साथै निरोगी बन्न पनि सहयोग गर्छ । जान्नुस्, फलफूलका विविध फाइदा :सुन्तलासुन्तलामा भिटामिन सी, पोटासियम र म्याग्नेसियम हुन्छ । सुन्तलाको प्र ...
किन पिउने लौकाको जुस ? यस्ता छन् ५ फाइदा, अवश्य जान्नुहोस्
एजेन्सी - मानिसहरु बिहानै उठ्नेबितिकै चिया वा कफी पिउने गर्दछन् । यो पहिलेदेखीनै चल्दै आएको चलन हो ।मानिसहरुले यो बानी परिवर्तन गरेर लौकाको जुस खाने हो भने शरीरलाई धेरै फाइदा पुग्ने गर्दछ । हामीलाई लौकाको जुसको बारेमा त्यति थाहा छैन ।प्राय लौकालाई तर ...